I-LIID: I-Intelligent CRM Ukungena kusuka ku-SmartPhone yakho | Martech Zone
I-LIID: I-Intelligent CRM Ukungena kusuka ku-SmartPhone yakho
NgoLwesibili, Okthoba 27, 2015 NgoLwesibili, Okthoba 27, 2015 Douglas Karr
Abathengisi bezentengiso badume ngokungangezi imisebenzi enkampanini yeCRM. Izinga lokungena lomsebenzi lingaba ngaphansi ngama-20%, okuholele ekubikezelweni kokuthengisa okwenziwe ngokususelwa kuleyo datha ukuvalwa ngo-80%. I-LIID ibhekana nale nkinga ngohlelo lokusebenza lwe-smartphone olunikeza ukuphindaphinda kokufakwa kwedatha namathuluzi okwenza impilo ibe lula njengokuthwalwa kwekhadi lebhizinisi namanothi okukhuluma kuya kumbhalo.
The I-LIID uhlelo lokusebenza lweselula lusebenza futhi njengomsizi wokuthengisa obonakalayo, ukukhumbuza abalandelayo ukulandela ngemuva komhlangano futhi baxhumane nawo wonke amacala aqhubekayo.
Uhlelo lokusebenza luyi-CRM-agnostic, okwamanje iyasekela Salesforce futhi Microsoft Dynamics nokuningi okufanele kulandelwe. Okuhle kunakho konke, kumahhala ukusebenzisa abathengisi ababili bokuqala enhlanganweni yakho! Abathengisi bangalanda ngisho nohlelo lokusebenza lwe-iOS noma lwe-Android futhi basethe ukuxhumana ku-CRM yabo uqobo.
Landa i-LIID ye-iPhone Landa i-LIID ye-Android
Tags: ukungena kwemisebenziuhlelo lokusebenza lwe-AndroidCRMuhlelo lokusebenza le-iphoneI-LIIDukungena ngemvumeMicrosoft Dynamicsuhlelo lokusebenza lweselulaizicelo zeselulasalesforce
Ungayisebenzisa Kanjani i-LinkedIn ukumaketha
Isayensi Yezwi Eliphelile